ဆယ်တန်းကျလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ ညီလေး / ညီမလေးများ ဖတ်ရန် – အနုပညာရပ်ဝန်း
ဆယ်တန်းကျတာ ဘဝတစ်ခုပျက်တာလို့ထင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်စာတော်မှ လူရာဝင်ပြီး လူတော်ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေကြတဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ သူတို့ဘယ်လိုပဲပြောပါစေ မင်းစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့
တကယ်တော့စာမေးပွဲဆိုတာ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာတော်သလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်တာမင်းတို့စာမေးပွဲမအောင်တာနဲ့မင်းတို့လူညံ့ဖြစ်မသွားဘူးမင်းတို့ စာမှာ မတော်ပဲ တခြားနေရာတစ်ခုခုမှာမင်းတို့ အရည်ချင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပြဖို့မင်းအတွက် အခွင့်ရေးပဲ။
အိုင်စတိုင်းပြောသလို ငါးတစ်ကောင်ရဲ့အစွမ်းကိုသစ်ပင်နိုင်စွမ်းနဲ့သွားပြီး အကဲဖြတ်ရင်အဲ့ငါးက သူ့ကိုသူ တစ်သက်လုံးအသုံးမကျတဲ့ငါးလို့ထင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ မင်းတို့ရဲ့ အရည်ချင်းတွေကိုဆယ်တန်းစာမေးနဲ့ အဆုံးဖြတ်ပေးချင်နေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို သူတို့မှားကြောင်းမင်းက အလုပ်နဲ့သက်သေပြရမှာ။
ဘဝမှာ အောင်မြင်တိုးတက်ကြီးပွားနေသူတွေကိကြည်လိုက်ပါ။ အများစုက စာမတော်ကြဘူး။ကျောင်းမှာသင်ပေးတယ်ဆိုတာ အချက်လက်တွေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကို ကျက်မှတ်နိုင်သူကစာတော်တယ် ။ မကျက်မှတ်နိုင်တဲ့မင်းတို့တွေကမက်က္မွတ္နိုင္တာ မဟုတ္ဘူး ။မင်းတို့စိတ်မဝင်စားလို့။မင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုခုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မင်းကြိုးစားပြဖို့ပဲလိုတာ။
ကျောင်းမှာ သင်လိုက်တဲ့ပညာတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အခါ ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းများပြန်အသုံးချလို့ ရလို့လဲ။ မယုံရင် အခုလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ ဘွဲ့ရသူတွေကို မေးကြည့်လိုက်ပါ။
အခုမင်းဘာစလုပ်ရမလဲဆိုတော့စာမေးပွဲကျလို့ အားငယ်နေတာ၊စိတ်ညစ်နေတာတွေကိုခေါင်းထဲကထုတ်ပြီး မင်းဘာဖြစ်ချင်တာလဲမင်းဝါသနာက ဘာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။
မင်းဟာ သူဌေးဖြစ်ချင်သူ??အောင်မြင်ကျော်ကြားချင်သူ??စြန္႔ဦးတည္ထြင္သူ ??အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သူ?⛹?အနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်သူဆိုရင်တော့???မင်းဘွဲ့ရဖို့ မလိုတော့ဘူး။
မင်းတို့ဖြစ်ချင်တာတွေကိုဘေးချိတ်ပြီးစာလုပ်နေရတဲ့ အချိန်ကုန်ခဲ့ပြီစာမေးပွဲကျသွားတာက မင်းရဲ့ပါရမီ နဲ့ အိမ်မက်တွေကိုဆြဲထုတ္မသြားနိုင္ဘူး။ဆရာဝန်နဲ့အင်ဂျင်နီယာကပဲ ကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးမဟုတ်ဘူး။တကယ်ချမ်းသာနေတာကဘွဲ့ကောင်းကောင်းမရတဲ့ သူတွေ။စာတော်တဲ့သူတွေဟာ အရမ်းမချမ်းသာကြဘူး။အရမ်းအောင်မြင်၊ချမ်းသာတဲ့သူအများစုကလည်းစာမတော်ကြဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပါ။
မင်းတို့က သင်္ချာကို နားလည်ဖို့ မလိုတဲ့အနုပညာရှင်တွေပဲ???
မင်းတို့က အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ သမိုင်းပညာတွေကိုသိဖို့မလိုတဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်သူတွေပဲ။?‍??‍??‍?
မင်းတို့က ဓာတုဗေဒညာသာ အမှတ်ကောင်းဖို့ကမင်းရဲ့ဂီတာလောက် အရေးမကြီးတဲ့ဂီတ ပညာရွင္ပဲ။???
မှတ်ထားပါ။ မင်းတို့အောင်မြင်ကြီးပွားချင်ရင်မင်းတို့ဝါသနာပါတာကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ။စာကိုမကြိုးစားသလို ကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုလည်းမကြိုးစားတော့မှ မင်းဟာတကယ်လူညံ့ဖြစ်သွားမှာ။
မိုက်ခရီုဆော့်ဖ်တည်ထောင်သူ Bill GatesFacebook ထြင္သူ Mark Zuckerbergစာကို စိတ်မဝင်စားတော့လို့ကျောင်းထွက်လိုက်တယ်ဘီလျံနာကြီးဖြစ်လာတယ်။စီရော်နယ်ဒိုနဲ့မက်ဆီဘာဘွဲ့ရလဲဘယ္သူမွ စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ဘူး။သူတို့ဂိုးဘယ်လောက်သွင်းနိုင်လဲဆိုတာပဲအရေးကြီးတယ်။⚽⚽??
အခုခေတ်က ပညာတတ်မှ ထမင်းစားရတဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်လုပ်ချင်တာကို အရူးမူးသာလုပ်။မင်းထမင်းမငတ်စေရဘူး။
ရွှေထူးတို့ဇနီးမောင်နှံဘွဲ့မရကြဘူးတစ်နိုင်ငံလုံးသူ့သီချင်းနားထောင်ကြတယ်ရွှေမှုံရတီဇာတ်လမ်းတွေ ရိုက်တယ်။ဖြူဖြူထွေး လုပ်ချင်တာမလုပ်ပဲဘွဲ့ရပြီး သာမန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်သာ လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုလို တစ်နိူင်ငံလုံးသိပါ့မလား ။ အခုလို Cele ဖြစ့်ပါ့မလား။သူတို့တွေ အခုလောက်ဝင်ငွေကောင်းပါ့လား။ဘွဲ့ကောင်းကောင်းရပြီး မပျော်ပဲဝန်ထမ်းလုပ်နေသူတွေထက် ကိုယ်ဝါသနာပါတာလုပ်ပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့ သူတို့ကို ပိုအားကျတယ်။
ဒီတော့ အောင်စာရင်းမှာ နာမည်မပါတဲ့ညီလေး ညီမလေးတို့ ကိုပြောချင်တာကမင်းတို့ဖြစ်ချင်တာကို ရူးရူးမူးမူးလုပ်ပါ။ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။ အခက်ခဲတွေရှိလိမ့်မယ်ကျော်ဖြတ်လိုက်ပါ။ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါစာမေးပွဲကျလို့ လူညံ့မဖြစ်သွားဘူး။ကိုယ်ဝါသနာပါတာကို မကြိုးစားရဲတော့မှမင်းက လူညံ့ဖြစ်မှာ။ထပ်ပြောမယ်။စာကို မကြိုးစားသလို ကိုယ်ဝါသနာပါတာကိုမကြိုးစားရဲတော့မှ မင်းတကယ်လူညံ့ဖြစ်သွားမှာ။
ကြည့်ရှု့သူပေါင်း သန်းနဲ့ချီရှိနေသည့် မြွေဟောက်နှင့်အတူ ကစားတဲ့ကလေးငယ်(ရုပ်သံ)